Mpanampy Mpitsabo, Mpivarotra Hani-masaka, Moto-taxi Ary Reny Faharetana : Fatoumata Diaby No Mariky Ny Fikirizana Te-Ho Tafita Ao Mali · Global Voices teny Malagasy
Mpanampy Mpitsabo, Mpivarotra Hani-masaka, Moto-taxi Ary Reny Faharetana : Fatoumata Diaby No Mariky Ny Fikirizana Te-Ho Tafita Ao Mali
Voadika ny 02 Jolay 2016 4:55 GMT
Fatim, mpivarotra Moto-taxi ao Sakolabada, Kéniéba any Mali. Nahazoana alàlana taminy.
Taorian'ireo taona marobe voamariky ny fifandonana tany avaratry ny fireneny, miasa miandàlana ho amin'ny fanarenana sy fampitambarana azy i Mali. Sarotra ny asa saingy tsy mitaraina tànana miempaka ireo teratany Maliana. Fatoumata Diaby no ohatra iray feno fampianarana amin'io Mali tsy mitaraina tanàna miempaka io ary manao ezaka isanandro hanarina ny toekaren'ny firenena. Fatoumata dia monina ao Sakolabada, ao afovoan'i Mali. Nihaona taminy ny Global Voices, raha iny izy eny ampitangenana ny moto-taxi-ny iny indrindra.
Fiantso mahazatra azy ireny ny hoe « Taxinin » na « katakatanin », ankehitriny ny moto-taxi dia ampiasaina saika manerana ny faritra rehetra ao Mali. Ampiasaina ho fitaterana iraisana any amin'ireo tanàna sasany toa an'i Ségou izay iezahany milahatra amin'ireo fiarakaretsaka mba ho safidy azo raisina ho an'ireo mponina an-tanàn-dehibe. Ao Bamako, ampiasaina ho fitaterana entana izy. Tany aloha dia asa natokana irery ho an'ny lehilahy, fa i Fatoumata no voalohany amin'ny vehivavy nandray ny familiana “taxinin”.
Ity ny tafa nifanaovana tamin'i Fatoumata , nangonin'i Boukary Konaté ho an'ny Global Voices :
GV: Afaka manolotra ny tenanao ho an'ireo mpamaky anay ve ianao ?
Fatoumata Diaby FB: Fatoumata Diaby no anarako, 35 taona. Avy any Kéniéba, saingy manaraka ny vadiko any Sakolabada, vohitra iray mpikaroka volamena any amin'ny 26 km miala an'i Kéniéba. Niteraka telo izahay : roa lahy ary vavy iray. Mpanampy mpitsabo aho, saingy tsy nanana vintana hanao io asa io.
GV: Omaly, tany Kati teny ambony moto-taxi ho any Kéniéba no nihaonako taminao. Nolazainao tamiko fa vao avy nividy ireo moto-taxis tao Bamako ianao ary handeha hivarotra azy ireo any Kéniéba. Mitaingina ireny moto-taxis ireny avy any Bamako hatrany Kéniéba ianao. Hazavao aminay ny antony anaovanao ity asa ity ary efa hafiriana izao?
FD: Indraindray dia tonga ho azy eny ny zavatra rehetra. Fiofanana ho mpanampy mpitsabo no nataoko, saingy tsy nomen'Andriamanitra vintana hanao io asa io aho. Mba tsy hidonàka fotsiny, nanokatra toerana fisakafoana iray aho tao Sakolabada tamin'ny 2011. Saingy tsy afaka nionona tamin'io asa tokana io aho ho an'ny ankohonako. Nividy moto-taxi iray aho, nianatra namily azy ary nanomboka nanao asa fitaterana entana tany amin'ireo faritra mpihady volamena. Mila mitatitra ny vato azony ho any amin'ny fikosohana ireo mpitrandraka mba hanavahany ny volamena. Izaho no niandraikitra ny fitaterana ireny vato ireny ho any amin'ny fikosohana. Mitatitra ny fitaovan'izy ireo eo anelanelan'ny tanànan'i Kéniéba sy ireo faritra fitrandrahana volamena ihany koa aho, any amin'ny toerana iasàn'izy ireo. Sady koa, mitatitra rano hamidy amin'ireo mpanjifa rehefa misy tsy fahampiana eny an-toerana.
Tamin'ny 2015, afaka nanokatra toerana fivarotana kojakoja fanolo aho ho an'ireo motos ao an-tanànan'i Sakolabada. Nialàko araka izany ny fitaterana mba hifantohako amin'io toerana fivarotana kojakoja fanolo io. Satria fantatr'ireo mpanjifa fa mba manana fahalalàna momba ny moto-taxis aho, dia tonga ao amiko manao famandrihana ry zareo isaky ny mila. Araka izany, mandeha mividy ireo zavatra nangatahana ireo any Bamako aho, ary dia fenoiko amin'ireo kojakoja fanolo novidiako tao Bamako ihany koa sady taingenako mankany Kéniéba na Sakolabada. Indraindray, na tsy misy famandrihana aza, tonga mividy ihany aho ary apetrako ao ampivarotana miandry ny mpividy. Dia tahaka izay no nanombohako ity famarotana moto-taxi ity.
GV: Ohatrinona ny moto-taxi iray ao Bamako ary ohatrinona ny tombony azonao aorian'ny famarotana izany indray any Sakolabada na Kéniéba?
FD: Miankina amin'ny fiakarana na fidinan'ny vidiny eo amin'ny tsena. Ohatra, afaka mividy moto iray aho amin'ny 1 180 000 FCFA ao Bamako ary manatitra izany ho any amin'ny mpanjifa amin'ny vidiny 1 230 000 FCFA. Andaniako 25 000 FCFA ny solika avy any Bamako. Ny tena zavadehibe ao anatin'izany dia ny fahafahako mitondra ireo kojakoja fanolo ao anatin'ilay moto-taxi, izay vidiako ho an'ny toerana fivarotako. Amin'izay aho tsy mandoa sarany ho an'ny fitaterana, na ho ahy, na ho an'ilay moto-taxi, na ho an'ireo kojakoja fanolo ho an'ireo mpamily fiara. Tsy tombony mivantana avy amin'ny fivarotana moto-taxi no kendreko, fa eo ihany koa ny fahafahana tsy mandoa ireo sarandalana ireo dia efa manome ahy tombony ho azo raha toa ka fantatra fa isaky ny fiara, ny sarandalana ho an'ny olona iray avy ao Bamako mankany Kéniéba dia 6 000 hatramin'ny 7 000 FCFA, 50 000 FCFA ho an'ny moto-taxi ary eo anelanelan'ny 30 000 sy 35 000 FCFA ho an'ireo kojakoja fanolo novidiako ho an'ny toerana fivarotako.
GV: Fatoumata, tsy zavatra mora ny sady mitantana tokantrano no manao ihany koa ity asa ity.
FD: Tsy mbola nisedra olana tsy vitako novahana aloha aho hatreto. Mahazo ny fanekena avy amin'ny vadiko aho manao ity asa ity ary tena manohana be ahy izy. Indraindray miasa miaraka izahay. Izy, miasa aminà toeram-pitrandrahana, saingy rehefa mandeha mankany Bamako aho hividy entana, dia izy no mitazona ny fivarotana. Ho an'ny asa an-tokantrano, miaraka mitantana izahay mivady mba hahafahan'ny tsirairay mahita fotoana hivelarana amin'ny asany. Naka tovovavy iray karamaiko am-bolana ihany koa aho hanampy ahy. Manampy anay amin'ny asa an-tokantrano izy ary mifanaraka tsara izahay. Araka izany, mirindra tsara ny fiainanay telo an'ity asa fivarotana ity sy ny asa an-tokantrano.
GV: Manao ahoana ny fifandraisana amin'ireo hafa mpivarotra moto-taxis aty Kéniéba?
FD: Mifandray tsara amin'ireo hafa mpivarotra aho. Samy maka ny tandrify azy isanandro eo ny tsirairay. Ny hany mampiavaka dia efa vita sedra eo ampahatongavana tamin'ny diako avy any Bamako ho aty Kéniéba ireo moto ary tsara. Aleon'ny olona ireny motos ireny toy izay ireo entina anaty fiarabe, izay indraindray miolana miova bika rehefa tonga noho ny vesatra napetraka teo amboniny tany anaty fiarabe tany.
GV: Manao ahoana ny fomba fitsaran'ny olona ny zavatra ataonao ?
FD: Tian'ny olona mihitsy ny ataoko. Mandrisika ahy amin'ity asa ity ny olona rehetra. Manararaotra aho misaotra ireo mponin'i Sakolabada sy Kéniéba amin'ny fampaherezana ataon'izy ireo. Manohana ahy betsaka na lahy na vavy, eny fa na hitan'ny vehivavy sasany ho manao asa tsy mifanaraka loatra amin'izay tokony ho an'ny vehivavy aza aho, ary ary noho izay indrindra no nanomezana ahy ny anaram-bosotra hoe « Katakataninbolila Fatim » (Fatim, ilay mpamily Katakanin, araka izay iantsoana ny moto-taxi amin'ny teny bambara).
GV: Mametraka oloana ho anao ve io fomba fiantso io?
FD: Tsia dia tsia! Fifaliana ho ahy aza ny nanomezana ahy anaram-bosotra tahaka izany! Manondro ny asako io, midika fa fantatra amin'ny asako aho, araka izany dia tiako ary angamba aza mendrika ahy tsara mihitsy. Ary fanampiny, tsy ny olona rehetra no hitovy hevitra sy hetaheta amiko .
GV: Anatin'ity asa ity, inona no fahatsiarovana mba azonao ifampizaràna aminay?
FD: Indray andro, hitan'ny rahavaviko fa taraiky be aho ary nantsoiny tamin'ny telefaona mba hanotaniany vaovao. Naka sisiny aho mba handray ny Telefaona ary nolazaiko azy fa naman'ny efa tonga aho, sady mitaingina moto (izay no voalohany indrindra nitondrako moto). Zendana izy, nilazàny daholo ny vehivavy sy ny tanora tao am-bohitra. Nitangorona daholo araka izany izy rehetra mba ho avy hitsena ahy an-tongotra teny am-pidirana ny tanàna, nitondra moto, nandeha fiara niaraka tamin'ny amponga. Zavadehibe tsy nampoiziko izay. Tena mankasitraka tanteraka ny mponin'i Kéniéba aho noho io fihetsika feno fankasitrahana io izay voninahitra lehibe sy fifaliana mahatretrika ho ahy.
GV: Miaina anaty fiarahamonina iray isika, izay raha ny fombandrazana dia misy asa natokana fotsiny ho an'ny lehilahy. Ao anatin'ny asanao ve, mitaky ny hanekena anao amin'ny maha-vehivavy anao ianao sady manao asa izay natokana ho an'ny lehilahy raha ny mahazatra?
FD:- Tsy ny hifampitaha amin'ireo lehilahy no ao an'eritreritro raha manao ity asa ity. Manao azy am-pitiavana aho, ataoko satria tiako, ataoko satria mahavelona ahy. Eo am-panatanterahana azy, hafatra no ampitaiko, ary io hafatra io dia tsy hafa fa fampisehoana amin'ireo vehivavy sy tanora hoe tsy fotoana intsony izao hipetrapetrahana, tsy tokony hidonàka fotsiny ny olona iray, tokony havela ny fanaovana safidy hitady asa mifanaraka amin'ny diplaoma sy ny hoe tsy maintsy any anaty birao no miasa. Io hafatra io no ampitako ary ary izaho no hitako ho ohatra iray amin'izany hafatra ampitaiko amin'ny rehetra izany. Raha ny momba ny hevitra fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy indray, tsy voafehiko ny pitsopitsony rehetra momba izany, fa ho ahy ny zavadehibe, indrindra ao an-tokantrano, eo amin'ny vehivavy sy ny vadiny, dia ny fifanarahantsaina, ny fifankahazoana sy ny fifamenoana. Rehefa mifankahazo tsara ny lahy sy ny vavy, izany no fahasambaran'ny tokantrano ary izany no ilay fitoviana katsahana!
GV: Inona avy ireo fahasahiranana efa nolalovanao hatramin'ny nanombohanao ny fitaterana tamin'ny moto-taxi avy any Bamako mankao Kayes?
FD: ao anatin'ity asa ity, tsy afaka miresaka fahasarotana goavana aho, saingy mandreraka ny mitaingina moto avy any Bamako mankany Kéniéba (400km). Indraindray, maty an-dàlana ihany koa ny moto. Rehefa mitranga eny an-dàlana ny olana tahaka izany, izaho ihany no mitsabo ny moto: manampina kodiarana na manolo diska. Ananako miaraka amiko daholo ny fitaovana ho an'ireny karazana tsy fahatomombanana ireny.
GV: Ny teny farany?
FD: Isaorako ianao nanao ity tafatafa ity. Ao anatin'ity asa ity, tsy mahery fo no ijereko ny tenako, fa ohatra iray, toy ny loharanonà aingam-panahy ho an'ireo vehivavy sy ny tanora. Antenaiko ho takatr'izy ireo amin'ny alàlan'izay ataoko, fa tapitra ny fotoana iheverana ny tena ho ambony na ambany mitaha amin'ny asa atao. Ny hany ilaina dia ny fitiavana ny zavatra atao ary mitolona satria miandry ery amin'ny faran'ny ezaka natao ny fahombiazana.
18 ora izayMediam-bahoaka